काठमाडौं, ३० असार । असार ३१ गते अर्थात् भोलि चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन । असार २५ गतेदेखि सरकारले बजेटको अन्तिम हिसाबको लागि कुनैपनि खर्च
प्रकाशित मिति : ९ months अगाडि
इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ज्योतिको निरन्तरता
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कार्यकारी प्रमुख ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सञ्चालक समितिको बैठकले चार वर्षका लागि कार्यकारी प्रमुखमा निरन्तरता दिएको छ । आज बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त
संकटमा ठमेलका व्यवसायी
दीपेन्द्र कुँवर ठमेल आफैँमा नामै काफी छ । विगत ५० वर्षदेखि ठमेलले विश्वभरका पर्यटकहरुको सेवा गरेको इतिहास छ । आज पनि कतिपय पर्यटकहरुले नेपाल भन्नासाथ ठमेलमा बिताएका रमणीय क्षणहरुको सम्झना
डेढ अर्बको पुनःकर्जा कोष
काठमाडौं, ३० असार । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन महिनाको शुरुमै घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघको आग्रहबमोजिम असार मसान्तसम्मको अवस्थालाई हेरेर
काठमाडौँ, २८ असार । कोरोनाका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरहेका बेला प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका दुई कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण देखिएपछि थप १९ कम्पनीले साधारण शेयर
काठमाडौं, २७ असार । व्यवसायीले बन्दाबन्दीको अवधिभरको बैंकको ब्याजदर शतप्रतिशत छुट दिन माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड–१९ को कारण व्यापार व्यवसाय
काठमाडौंँ । नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर ५ मा पहिलो पटक नवलपरासी जिल्लामा रहेको दूरसञ्चार कार्यालय बर्दघाटको पुरानो प्रविधिको तारवाला फोन (पिएसटीएन) लाई फाइबरमा आधारित एफटिटिएच सेवाले पूर्णरुपमा विस्थापित गर्ने कार्य
काठमाडौं । चीनका लागि नवनियुक्त नेपालका महामहिम राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसंग भेटघाट भएको छ । उक्त अवसरमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले तातोपानी र रसुवागढी
प्रकाशित मिति : १० months अगाडि
मौद्रिक नीतिमा ‘बीग मर्ज’ को विशेष व्यवस्था ?
काठमाडौं, २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लगभग अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । हामी ‘विभिन्न पक्षको राय, सल्लाह र सुझावलाई समेटेर मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप
अर्थमन्त्रीको अर्काे नीतिगत भ्रष्टाचार
काठमाडौं, २३ असार । बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेपेका डा. युवराज खतिवडाले गरेका गोप्य सेटिङहरु धमाधम खुल्न थालेका छन् । बिद्युतीय गाडी र चकलेट मात्र होइन, बजेटमार्फत उनले थप